News - Waa maxay dharka saddex-geesoodka ah? Maxay caan u tahay?
Sida laga yaabo inaad ka qiyaastay magaca triblend, isku dhafka shaatiga ayaa laga sameeyay saddex dhar oo kala duwan. In kasta oo funaanad joogto ah ay tahay 100% cudbi, haddana saddexda shay ee loo yaqaan 'triblend tea' waa 50% polyester 25% cudbi 25% Rayon ama 50% caag ah 38% cudbi 12% Rayon, taas oo iyaga ka dhigaysa mid jilicsan. Kinda waxay u egtahay funaanad qurux badan oo waxyar ka yar oo fidsan oo iyaga u sii dheer. Shaarkayaga saddex-labiska ah wuxuu kaloo sameeyay teknolojiyad gaar ah oo uu maydhay, ha u dareemo raaxo badan.
Ka waran daabacaadda funaanadda saddex-geesoodka ah?
Waxyaabaha kala duwan ee saddexda ah ma jahawareerinayaan naqshadaha garaafka ee lagu daabacay? Runtii maahan. Waxaa jira xoogaa yar oo kala duwanaansho midab ah oo u dhexeeya seddexleyda iyo shaatiga cudbiga, laakiin kala duwanaanshuhu wuu yaryahay. Hadday wax jiraan, saddex-geesoodyadu waxay naqshadeynta u eegaan xoogaa ka wanaagsan. Waxaad eegi kartaa sawirka aan u habeynay macaamiisheenna.
Marka halkaas waxaad ku haysataa: walxaha ugu jilicsan weligood, seddexlaha. Hoos waxaa ku yaal midabkeenna midab leh ee seddex-geeslaha ah, midabada midabkani waa mid diyaar ah, moq kaliya wuxuu u baahan yahay 120pcs / color
100% funaanad cudbi ah
Haddii aad rabto inaad sameyso wax kale oo midabyo ah, waan ku rinjiyeyn karnaa sida ku xusan lambarkaaga midabka pantone. 50% polyester 25% suuf 25% Rayon wax seddex ah, moq midabka loo habeeyay waa 2000pcs / color. Haddii aadan u baahnayn tiro aad u tiro badan, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad dooran karto 50% polyester 38% cudbi 12% Rayon, moq wuxuu ahaan lahaa 500pcs / color. Adeegga midabaynta midabaysan ee loo habeeyay ayaa bilaash noqon kara.
Marabtaa inaad bilowdo ganacsi iibinta funaanadaha saddex-geesoodka ah? Isku day inaad nala soo xiriirto si aad u hesho hal tixraac oo bilaash ah!